မာရိသညျ Custis Lee က: ပြည်တွင်းစစ်ကြီးပုံရောဘတ်အီး Lee ၏ဇနီး
မာရိသညျ Custis Lee က
ရောဘတ်အီး Lee ကမာသဝါရှင်တန်၏သားစဉ်မြေးဆက်၏ဇနီး
မာရိကအန္န Randolph Custis Lee က (အောက်တိုဘာလ 1, 1808 - နိုဝင်ဘာလ 5, 1873) ၏ကြီးမြတ်-မြေးဖြစ်ခဲ့သည် မာသဝါရှင်တန် နှင့်ဇနီး ရောဘတ်အီး Lee က ။ သူမသည်အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား, သူ့မိသားစုအမွေအိမ်ရဲ့ site ကိုဖြစ်လာခဲ့သည် Arlington အမျိုးသားသုသာန် ။
မာရိရဲ့ဖခင်ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်ပန်းခြံ Custis, ထိုမွေးစားသားနဲ့ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်၏ခြေလှမ်း-မြေးဖြစ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ မာရိသညျမိမိအသာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူကလေးသည်ကြီးနှင့်အရှင်သည်သူ၏အမွေဆက်ခံသူ။
သူမသည်ဆမ်ဟူစတန်အပါအဝင်များစွာသောလူတို့သညျကရယူရန်, သူ၏ဝတ်စုံပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ သူမသည်အနောက်ပွိုင့်ကနေသူ့ဘွဲ့ရပြီးနောက်ရောဘတ်အီး Lee ကသူမသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေလူသိများချင်ပါတယ်ဝေးသောဆွေမျိုးများထံမှ 1830 ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ (သူတို့ကအသီးသီးတတိယဝမ်းကွဲ, တတိယဝမ်းကွဲတစ်ချိန်ကဖယ်ရှားနှင့်စတုတ္ထဝမ်းကွဲသူတို့ကိုအောင်, ဘုံဘိုးဘေး Robert Carter ကငါရစ်ချက် Lee က II နှင့်ဝီလျံ Randolph ရှိခဲ့ပါတယ်။ ) သူတို့ကဇွန်လ 30 ရက်နေ့တွင်သူမ၏မိသားစုအိမ်, Arlington အိမ်မှာနန်းတော်ထဲမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြ, 1831 ။
လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်ထံမှ Highly ဘာသာရေး, မာရိ Custis Lee ကမကြာခဏဖျားနာခြင်းဖြင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူမ Arlington, ဗာဂျီးနီးယားအတွက်သူမ၏မိသားစုအိမ်မှာအများဆုံးပျော်ရွှင်ခဲ့သော်လည်းစစ်တပ်အရာရှိတဦး၏ဇနီးအဖြစ်, သူမ, သူ့ကိုနှင့်အတူသွားရောက်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ထို Lees မာရိသည်မကြာခဏအဆစ်အဆစ်အပါအဝင်နာမကျန်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောမသန်စွမ်းခံစားနေရပြီးအတူကလေးခုနစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်တစ်ဦးအိမ်ရှင်မအဖြစ်နှင့်သူမ၏ပန်းချီကားနှင့်ဥယျာဉ်လူသိများခဲ့သည်။
သူမ၏ခင်ပွန်းကဝါရှင်တန်သွားသောအခါသူမအိမ်တွင်ဆက်လက်ရှိနေရန်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ သူမသည်ဝါရှင်တန်၏လူမှုရေးစက်ဝိုင်းကိုရှောင်ရှားပေမယ့်နိုင်ငံရေးမှာ avidly စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်နှင့်သူမ၏ဖခင်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ Lee ကမိသားစုအာဖရိကန်နွယ်ဖွားလူအတော်များများကျွန်ခံရ။ မာရိကနောက်ဆုံးမှာသူတို့အားလုံးလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်ယူဆများနှင့်ဖတ်ရေးရန်နှင့်ချုပ်, လွတ်မြောက်ခြင်းပြီးနောက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျရနျမှနျအမြိုးသမီးမြားသင်ပေးတယ်။
ဗာဂျီးနီးယားပြည်တွင်းစစ်ကြီးရဲ့အစမှာအမေရိကားရဲ့ကွန်ဖက်ဒရိတ်ပြည်နယ်များပူးပေါင်းတဲ့အခါ, ရောဘတ်အီး Lee ကဖက်ဒရယ်စစ်တပ်နဲ့သူ့ရဲ့ကော်မရှင်နှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့်ဗာဂျီးနီးယား၏ဗိုလ်ခြေတစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ, ရန်၎င်း၏နီးလုပ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့နှောင့်နှေးမှုနှင့်အတူသူ၏နာမကျန်းတဲ့ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဖို့အချိန်သူမ၏အများကြီးချုပ်ထားမာရိသညျ Custis Lee က, မိသားစုရဲ့ဥစ်စာများစွာကိုတက်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် Arlington မှာအိမ်ထဲမှထွက်ရွှေ့ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချခဲ့ပါတယ် ပြည်ထောင်စုတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းယူခြင်းများအတွက်ပစ်မှတ်။ ဒါကြောင့်ခဲ့ - အခွန်ပေးဆောင်ဖို့ပျက်ကွက်ဘို့, အခွန်ပေးဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုပုံငွငျးပယျခဲ့ကွသျောလညျး။ စစ်ပွဲသူမ၏ Arlington အိမ်အပိုင်ပြန်လည်ဖို့ကြိုးစားနေအဆုံးသတ်ပြီးနောက်သူမသည်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရသည်။
"ငါသည်ငါ့ချစ်လှစွာသောဟောင်းအိမ်စဉ်းစားရန်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ညံ့ဖျင်းသောဗာဂျီးနီးယားအရပ်ရပ်အပေါ်ဖိအားပေးလျက်ရှိသည်, သေးငါသည်ဘုရားသခင်၏သေးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နှုတ်မည်ခိုလှုံပါ၏။ မယ်ဆိုတာကမြေပေါ်မှာဖျက်ဆီးဒါမှမဟုတ် Potomac အတွက်နစ်မြုပ်ထက်လဲသေကြပြီခဲ့ ထိုကဲ့သို့သောလက်သို့။ " - သူမ၏ Arlington နေအိမ်အကြောင်းကိုသူ Mary Custis Lee က
သူမကစစ်ပွဲ၏အများကြီးသုံးစွဲဘယ်မှာ Richmond မှစ. , မာရိနှင့်သူ၏သမီးခြေအိတ်ထိုးပြီးနှင့်ကွန်ဖက်ဒရိတ်ကြည်းတပ်အတွက် စ. စစ်သူရဲတို့အားဖြန့်ဝေရန်သူမ၏ခင်ပွန်းကသူတို့ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။
ရောဘတ်ဟာကွန်ဖက်ဒရိတ်များလက်နက်ချပြီးနောက်ပြန်ပြီးလျှင်, မာရိသသူဝါရှင်တန်ကောလိပ် (နောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်နဲ့ Lee ကတက္ကသိုလ်အမည်ပြောင်း) ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့သည်ဘယ်မှာ Lexington, ဗာဂျီးနီးယားမှရောဘတ်နှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
စစ်ပွဲကာလအတွင်းဝါရှင်တန်ထံမှအမွေဆက်ခံမိသားစုအများအပြားဥစ္စာဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်။ အများအပြားပျက်စီးခဲ့ကြတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်စစ်ပွဲပြီးနောက်, ဒါပေမယ့်တချို့ - ငွေအချို့ကော်ဇောတို့တွင်အချို့စာလုံးများ - အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Arlington အိမ်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သူများသည်အမေရိကန်လူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကွန်ဂရက်ကကြေညာခဲ့သည်။
ရောဘတ်အီး Lee ကမဟုတ်သလိုမာရိသညျ Custis Lee ကမပြည်တွင်းစစ်ကြီး၏အဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ဟောင်း Arlington အိမ်မှာကြည့်ဖို့တစျခုခရီးစဉ်ကိုအောင်ပြီးနောက် - သူသူမ၏နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်သူ Mary Custis Lee ကနှောငျ့ဖြင့်, သူသည်နိုဝင်ဘာလ 5, 1873 ရက်တွင် Lexington သေဆုံးခဲ့ 1870. အဆစ်၌သေကြ၏။ 1882 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအာဏာရအတွက်အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်မိသားစုမှအိမ်ပြန်ရောက်; မာရိနဲ့ရောဘတ်ရဲ့သား, Custis, ညာဘက်ကျောအစိုးရကကရောင်းချခဲ့သည်။
မာရိသညျ Custis Lee ကသူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Robert E. နှင့်အတူသင်္
Lexington, ဗာဂျီးနီးယားဝါရှင်တန်နဲ့ Lee ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအပေါ် Lee က။
Marie Antoinette က
နန်စီ Astor: Commons များ၏အိမ်များတွင်ထိုင်ပထမဆုံးအမျိုးသမီး
ရှေးဟောငျးအီနှင့်, Classical ကမ္ဘာ့ဖလားအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရသောမင်းတို့
1394 - Castile 1354 ၏ Constance
မာရိသညျ Wollstonecraft အမွေအနှစ်
ကိတ် Chase Sprague
ဘယ်လိုဖြစ်သူ Colin Kaepernick ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံတော်သီချင်းဆန္ဒပြဝေဖန်သူများကမှားတယ်
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်မှူးချုပ်က Nathaniel လိုင်ယွန်
သင်က Big Nate ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်လင်ကွန်း Peirce အကြောင်းသိထားသင့် 10 ဦးအရာ
ကားသို့မဟုတ် Truck ကားဘီး Repaint လုပ်နည်း
SDL.NET သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာ အသုံးပြု. ကို C # ထဲမှာ programming ဂိမ်း
ရှေးဟောငျးအီဂဂရိနိုင်ငံ မှစ. မြေအိုး၏အချိန်ကာလ
2018-2019 LSAT စမ်းသပ်ခြင်းနေ့စွဲများ
ရည်ရွယ်ချက်မှာ primer 7: ဝိညာဉ် Ball ကိုကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ ဆက်သွယ်ရန်ပွိုင့်ရည်ရွယ်ချက်
နိုင်ငံတော်သမ္မတဟယ်ရီ Truman Fast Facts
စပိန်အတွက်ကောင်းမွန်သော Interjection အဖြစ် '' Buenos '' အသုံးပြုခြင်း
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: Kennesaw တောင်တန်း၏တိုက်ပွဲ
အရွက် Abscission နှင့် Senescence
သင်က Mumford & Sons လိုပဲ အကယ်. ...